Global Voices teny Malagasy · 2 Mey 2013
02 Mey 2013
Tantara tamin'ny 02 Mey 2013
Fihetsiketsehana Nandritra ny Fetin'ny Asa Tao Azia Atsimo-Atsinanana [An-Tsary]
Azia Atsinanana02 Mey 2013
Manao jery tamberina ny fihetsiketsehana nandritra ny andron'ny voalohany volana mey notontosaina tany Kambodza, Filipina, Indonezia ary Singapore ny Global Voice. Ny fivoriana izay nokarakaraina hampiako ny fitakiana isan-karazan'ny mpiasa sy ireo vondrona mpiaro (misolo vava ny mpiasa) dia nilamina ihany amin'ny ankapobeny nanerana ny renim-paritra.
Niala Tsiny Tao Amin'ny Facebook Noho Ny Ady An-trano Tamin'ny Taona 1994 ny Jeneraly Yemenita
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Mey 2013
Mananganan-tsaina ny firenena sady miventsoventso teny filamatry ny fahaleovantena, an'arivony ireo tonga tao an-tanàna renivohitry Aden taloha sy tanàna hafa ao Atsimon'i Yemen tamin'ny 27 Aprily 2013, tanàna izay efa zatra mankalaza ny andro nanambaran'ny Tavaratra ady tamin'ny vahoaka tatsimo sy “nibodoina” ny taniny tamin'ny taona 1994, araka ny famaritan'ireo...
Mariazy ho an'ny Rehetra : Ahoana ny Eritreritr'ireo Ivoariana ?
Lany tao Frantsa tamin'ny herinandro lasa teo ny lalàna “mariazy ho an'ny rehetra” izay manome alalana ny fanambadiana na eo amin'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy. Ny adi-hevitra mafana vay sy nampitain'ny fampielezam-baovao miteny frantsay naharitra ambolana no nanery ny firenena Afrikana hiresaka momba azy io. Efa maro...
Venezoela : Mampiseho Harefon'ny Foto-kevitr'i Chavez Ny Valim-pifidianana
Amerika Latina02 Mey 2013
Ny valim-pifidianana filoham-pirenena natao ny alahady 14 aprily 2013 dia nahitana taratra sahady ny fanombohan'ny fihemoran'ny foto-kevitra Chavez. Ny elanelana izay tsy misy afa-tsy isan-jato roa sy ny fitarainana samihafa marobe mikasika ny tsy ara-dalàna (eo amin'ny tranga 3.200) nandritra ny asa no nitarika ny Governoram-panjakàn'i Miranda, Henrique Capriles Radonsky,...